लाखौं ठगीको मुद्धा लागेपछि अनमोल केसीले पहिलो पटक मुख खोले ! दुखी हुँदै भने- मेरो बेइज्जत गरियो (भिडियो हेर्नुस) – " सुलभ खबर "
लाखौं ठगीको मुद्धा लागेपछि अनमोल केसीले पहिलो पटक मुख खोले ! दुखी हुँदै भने- मेरो बेइज्जत गरियो (भिडियो हेर्नुस)
केही दिन अगाडि मात्रै नायक अनमोल केसीले ५ लाख ठगि गरेको भन्दै निर्माताद्वय जयन श्रेष्ठ र रुपेन्द्र खड्गीले प्रहरी परिसर टेकुमा मुद्दा दर्ता गराए । चलचित्र ‘धुपौरे’मा काम गर्ने भन्दै सम्झौता गर्दा लिएको ५ लाख अनमोलले फिर्ता नगरेको भन्दै उनी बिरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । मुद्दा दर्ता भएको केही समय अनमोल चुप बसेका थिए । तर, अहिले अनमोलले यस विषयमा आफ्नो स्पष्टिकरण दिएका छन् । ‘ए मेरो हजुर ४’ को छायांकनमा व्यस्त अनमोलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त विषयमा स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
उनले आफूलाई ठगीको आरोप लागेकोमा स्तव्ध भएको लेखेका छन् । उनले त्यहाँ चलचित्रको स्कृप्ट चित्त बुझ्दो नभएका कारण आफूले चलचित्र छोडेको र त्यहीँ समय पैसा फिर्ता गर्न खोज्दा उहाँहरुले नलिएको अनमोलले लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यहाँहरु सबैलाई अवगतै छ कि, मैले चलचित्र साइन गर्दा मेरो विवेकले भ्याएसम्म स्क्रिप्टलाई प्राथमिकता दिने गरेको छु । ‘धुपौरो’ साइन गर्दा मैले यसको वानलाइन स्टोरी मात्र सुनेको थिएँ । स्क्रीप्ट तयार भएर आउँदा त्यो मैले सुनेको वानलाइन भन्दा धेरै फरक थियो । मैले निर्माता निर्देशकलाई स्क्रीप्टमा थप काम गर्न आग्रह गरेँ । स्क्रीप्टमा थप मेहनत गरेर अझै राम्रो सिनेमा बनाऊ भन्नु के मेरो गल्ती हो र ?’
निर्माता तथा निर्देशकले चित्त नबुझेको स्कृप्टमा छायांकन गर्ने कर गरेपछि आफूले चलचित्र छोड्न बाध्य भएको अनमोलले लेखेका छन् । अनमोलले अहिले पनि निर्माताहरुले आफूसँग आएर पैसा मागे सजिलै फिर्ता दिन तयार भएको उल्लेख गरेका छन् । अनमोलले आफू बाहिर भएको समयमा निर्माताहरुले चरित्यहत्य गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सुटिङको शिलशिलामा बाहिर भएको मौका छोपी मेरो चरित्रहत्या गर्न खोज्नु भएकोमा म अत्यन्त दुखी भएको कुरा अवगत गराउँदै उहाँहरुसँग एडभान्स लिएको रकम जुनसुकै समयमा म फिर्ता दिन तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ भिडियो हेर्नुस-